ကြောက်လန့်နေပြီလားနအဖ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
September 23, 2006, 5:01 am
မကြာခင် ရက်ပိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အာဏာသိမ်းပါတယ်.. အစကတော့ ဘာကိုရည်ရွယ်မှန်းမသိတာနဲ့ အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ရတယ်.. သူများနိုင်ငံမှာ ပြည်သူလူထုအတွက် စစ်တပ်က၀င်ပြီး သွေးထွက်သံယို တစ်စက်မှမဖြစ်ဘဲ ပြေပြေလည်လည်အားလုံးဆောင်၇ွက်ခဲ့တယ်.. မြန်မာပြည်မှာတော့ မြင်သမျှ ဆန့်ကျင်သမျှ အကုန်ပစ်ခတ်နေတာ တကယ်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ.. ထိုင်းပြည်သူလူထုက စစ်တပ်ကိုကြည့်သော မျက်လုံးတွေက မြန်မာလူမျိုးတွေ နအဖကိုကြည့်တဲ့ မျက်လုံးနဲ့ တခြားစီဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်.. ထိုင်းကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က မကြာခင်မှာ ဒီမိုကရေစီအစိုးရကို ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးမယ်ဆိုတော့ ထိုင်းနိုင်ငံကို သိပ်ကြည့်မရပေမယ့် လေးစားမိပါတယ်.. ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက မြန်မာပြည် အခြေအနေနဲ့များ တခြားစီပါပဲရှင်… ချစ်ခင်ရတဲ့ ဘဘဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေနဲ့ မောင်အေးကလည်း ကာကွယ်ရေးဦးစီးရာထူးတွေကို သူတို့လူတွေပဲဖြစ်တဲ့ သူရရွှေမန်းနဲ့ သူရမြင့်အောင်ကို လွှဲပေးလိုက်တာ ဘာမှမဆန်းပါဘူး.. ဒီပုတ်ထဲကဒီပဲတွေသွားလွှဲတာ ဘာမှဖြစ်လာမှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး.. ကြောက်ကြောက်နဲ့ စိတ်ကူးတည့်ရာ လျှောက်လုပ်နေတယ်ထင်ပါတယ်.. တီတီစီမှာလည်း ဗုံးပေါက်တယ်အသံတော့ ကြားလိုက်တယ်.. ကျောင်းသားတွေ မထိလို့ စိတ်သက်သာရာ ရမိတယ်.. မြန်မာပြည်အခြေအနေကို လုံခြုံရေးကောင်စီထိတက်တယ်ဆိုတာ အခုအခါ ပထမအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်မတို့ လူအခွင့်အရေးလိုချင်တဲ့ အပြင်ကလူတွေအားလုံးတောင်းဆိုမှု ကြိုးစားမှုတွေရလဒ်အမြန်ဆုံး အကောင်ထည်ဖော်နိုင်တော့မှာပါ… သင်္ချိုင်းသာရှာထားပေတော့ နအဖရေ…….
ဘာတွေလုပ်နေတာတုန်းဟ ရူးနေပီလား မသိဘူး ဟားဟား
Comment by Yan Aye September 23, 2006 @ 8:32 am
my little sister, I really appreciate your works:) You have posted the political issues on these day.Your sound looks angry and you are not satisfied with the current situation of our county:) The people of Myanmar has the same feeling as you have. That’s true. but most of them will say to you like YAN AYE said:) because They don’t dare to voice out. Keep it up, but When you think about this government, you may feel angry. Careful!! Anger makes mistakes. Relax and Think about your study.. Think about Reconstructin for country:)
Comment by ayugyi September 23, 2006 @ 9:37 am
Ya.. I admit I am stupid for truth. But How about you?.. Think about your standard… Our country became worse situation and where’s ur belief ???… Don’t compare with yours selfish mind & cruel decision cos I amagirl who love truth till I die.. Take care yourself & Don’t try to disturb me..
Comment by LIN LET KYAL SIN September 23, 2006 @ 3:12 pm
Dear Bro Ayugyi,
I have been writing about our country situation since I write these blog… Thanks for your comments. It’s everyone responsibilities to get freedom for Burma…. I do notice I have quite anger these days.. Thanksamillion for your advice, bro.. I am quite sensitive and trying to control myself… For YAN AYE part, I don’t want to suggest him anything. I have already explained him lots of time what is truth.. Even he can’t do like us, I do not blame him.. We just want them to support for democracy.. But He choose for his life.. What I can do ?.. Leave him there & he will understand after army is going down… Thanks for all…
Comment by LIN LET KYAL SIN September 23, 2006 @ 3:20 pm